Kitra vehivavy – «Division elite»: nifoha tamin’ny torimasony ny Prescoi | NewsMada
Kitra vehivavy – «Division elite»: nifoha tamin’ny torimasony ny Prescoi
Niditra tamin’ny andro fahefatra, omaly alatsinainy, ny fifaninanam-pirenena, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra, sokajy vehivavy. Fihaonana, notanterahina teny amin’ny kianja Carion Manjakandriana, toy ny mahazatra. Nifoha tamin’ny torimasony ny Prescoi avy any Vakinankaratra, satria nahazo fandresena, 1 no ho 0, ry zareo, nanoloana ny Som Boeny. Nisantatra ny fahazoany isa izany ny tovovavin’Antsirabe, tamin’ity.
Ankoatra izay, mbola manohy ny fahombiazany hatrany ireo ekipa vaventy, toa ny Askam Itasy, izay nanamontsana indray ny AS Comato Atsimo Andrefana, tamin’ny isa 5 no ho 0. Adin’ny samy Analamanga kosa ny fihaonana teo amin’ny Sab-Nam sy ny Mifa. Lavon’ny Sabotsy-Namehana, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0, tamin’ity, ny Mifa. Tetsy ankilany, lavon’ny Asot, tamin’ny isa mazava 3 no ho 0, ny Ascuf Matsiatra Ambony.
Miala sasatra ny ekipa amin’ity talata ity ary hitohy indray ny fifanintsanana ny alarobia izao ka anisan’ny lalao tena andrasan’ny rehetra ny fihaonan’ny Asot sy ny Askam, izay samy tsy mbola resy, hatreto. Ny Som Boeny indray, hifanazava, amin’ny Mifa. Ny AS Comato, hidona amin’ny AC Sab-Nam ary ny Ascuf, hifampitana amin’ny Prescoi.